Toluna Kutanga: Chaiyo-Nguva Yevatengi Njere Neiyo Global Nharaunda | Martech Zone
Toluna Kutanga isingachinji, yekupedzisira-kumagumo, chaiyo-nguva mutengi njere chikuva. Izvo zvigadzirwa zvinopa ruzivo rwevatengi, kutsvagurudza kwemusika, uye kunopa simba kune vatengi kuti vaite pakarepo nekutsvagisa kwehuwandu uye hwehunyanzvi mune chaiyo-nguva. Kusiyana neyakajairwa misika yekutsvagisa mapuratifomu, Toluna anosanganisa zvese tekinoroji inodiwa uye mukana kune wepasirese nharaunda kupa ruzivo iwe rwaunoda.
Kunyangwe iri agile nyowani yechigadzirwa kuvandudza kana kuyedza mhando uye yekutaurirana mameseji, Toluna ane yevatengi njere chikuva chekubatsira mune yako musika tsvagiridzo yevatengi:
Consumer Kungwara -Svika sosi imwechete kune ese ako mutengi nzwisiso. Toluna Kutanga ndeyekupedzisira-kusvika-kumagumo kwehungwaru njere papuratifomu uye neine chete login. Wana huwandu hwakawanda hweakazvimiririra ekuona mhinduro dzinofukidza ongororo dhizaini, yakasanganiswa yekuongorora vakapindura, uye nekumaka dhibhodhi kusanganisira ruzivo uye mazano.
Analytics uye Dashboards - Tsvaga yako data ipapo ipapo. Kubva kune chaiyo-nguva munda mishumo uye mazwi echirevo kune kumwe kuongorora kwepamberi. Edza kuita uchipesana neKPIs mumaminetsi nemadhibhodhi akagadzirirwa kupa zvinonzwisisika zvinoitika. Kurema data, gadzira mashoma-vanhu, kusefa uye kuitisa ese matanho eakakosha kuyedza. Dhonza uye udonhedze PowerPoint masiraidhi, izwi gore zviito, kuvaka matafura, uye kumisazve mabhanji pazvinenge zvichidikanwa.
Nharaunda uye Nhaurirano Dzepamoyo - Kurumidza kubatana nevanhu vanonyanya kukoshesa brand yako. Chera zvakadzika uye uzarure manzwiro uye zvinokurudzira zvinotungamira maitiro evatengi. Gadzira nharaunda dzemabhizinesi dzakazara-uye dzakanyanya-kubatika-zvisinei nemusika wako. Gadzira yakamisikidzwa Live Kukurukurirana mune maminetsi uye batana neako tarisiro vateereri.
Maitiro Ekuziva - Nzwisisa maitiro evatengi pane mobile uye desktop, mawebhusaiti, uye maapp. Inosanganisira maapplication akaiswa, mafambiro ekufambisa, maitiro ekutsvagisa, maitiro ekutsvaga, uye ruzivo rwekutenga kune vatengesi vepasirese.
Zvoga Kuenzanisira - Vanowana vanopindura mune chaiyo-nguva. Mutengo, ongorora kugona uye kuvhura mapurojekiti mumaminetsi. Toluna yakazara otomatiki sampling mhinduro inopa vatsvagurudzo mutsara wakanangana nenharaunda yedu ine simba yevanonyatsoongorora, vakapindura zvakanyanya.
Global Panel Nharaunda - Tinya musimba revanopfuura mamirioni makumi matatu vanhu kutenderera pasirese. Nhengo dzedu dzakagadzirira, dzinoda, uye dzinokwanisa kupa mhinduro iwe yaunoda, zvese mune chaiyo-nguva yekuwedzeredza yako yekuita sarudzo. Target vatengi pamisika makumi manomwe + vachishandisa zvinopfuura mazana maviri ehuwandu hwevanhu uye maitiro.
Tsvakurudzo Services - Nyanzvi dzemumba dzaToluna dzakabatana nekambani yehanzvadzi yavo Harris Interactive uve nehunyanzvi hwakadzika hwepamusoro hunogona kuita izvo zvisingazivikanwe, kuzivikanwa Unyanzvi hwavo hwakabatanidzwa mune yedu yega-sevhisi otomatiki mhinduro. Kana ivo vanogona kugadzira yechinyakare chirongwa neyekutsvagisa nyanzvi. Chero basa rinosangana nezvinodiwa zvako.
Ronga iyo Toluna Kutanga Demo
Tags: zvoga zvakabudiswamaitiro evatengikunzwisisa kwevatengirarama hurukurokutsvakurudza misikamabasa ekutsvagisatoluna
Zombie-Vateveri: Vakafa Vari Kufamba MuNyika Yekusimudzira Kushambadzira